माओवादीको आगामी कार्यदिशा - Naya Patrika
माओवादीको आगामी कार्यदिशा
हरिबाेल गजुरेल, काठमाडौं | साउन ०२, २०७४
अहिले माओवादी पार्टी महान् सम्भावनाको स्थानमा छ । त्यसैले माओवादीले इतिहासका कमी–कमजोरीको ठीक ढंगले समीक्षा गर्‍यो भने उसले अबको राजनीतिक वातावरणमा आधिपत्य जमाउन सक्छ । एमाले ‘लेफ्टिज ग्राउन्ड’ छाडेर प्रतिक्रियावादीमा रूपान्तरित भइसकेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीको आकार सानो होस् यो ठूलो, देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, भूमिसुधार र सामाजिक न्यायका प्रसंगवरिपरि देश घुमिरहेको छ र एमाले यी एजेन्डाविरुद्ध उभिएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले ‘लेफ्ट ग्राउन्ड’ लिनुपर्छ । माओवादी भनाइ र गराइमा किसान, मजदुर, सुकुम्बासीलगायत आधारभूत वर्गको पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो र त्यसमा राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई जोडेर अघि बढ्यो भने लेफ्ट ग्राउन्ड माओवादीकै वरिपरि रहन्छ । एमालेभित्र दक्षिणपन्थी हाबी भइरहेको र अहिलेको परिवर्तन मन नपराएर उल्टाउन खोज्नेहरू हाबी भइरहेका छन् । तसर्थ माओवादीले आफूलाई सच्याउने हो भने ठूलो राजनीतिक सम्भावना छ ।
वास्तवमा माओवादी सहरलाई बदल्न आएको थियो तर सहरले माओवादीलाई बदल्यो । अर्कातिर सुकुम्बासी, किसान, मजुदरवर्ग, जसलाई माओवादीले आफ्नो सम्झेको छ, त्यो वर्गसँग पनि दूरी बढेको छ । विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्झौता गर्दै जाँदा माओवादी आफ्ना वर्गसँग कम घुलमिल भएको हो । त्यसैले अबको राजनीतिक गतिविधिसँग जुध्दै अगाडि बढ्नु एक मात्र विकल्प हो । माओवादीको माथिल्लो कमिटी सचिवालय समितिको बैठक सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ, यसबाट माओवादीले आफ्नो विचार र राजनीतिलाई स्पष्ट पार्दै कुन वर्गको सेवा गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अहिलेको निर्वाचनले माओवादीको नतिजा कमजोर हुँदा सच्चिनु आवश्यक रहेको पुष्टि गरेको छ । जनतालाई बिग्रिएको माओवादी मन नपरेको हो, सिंगो माओवादी पार्टी नै मन नपरेको होइन ।
तल्लो वर्गलक्षित रणनीति
विकासको कुरा त जसले पनि गर्छ । हिजो सामन्तले पनि विकासका कुरा गरे । तर, विकासको लक्ष्य के हो ? विकासको प्रतिफल पाउने को हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यहाँ तल्लो वर्गका नागरिक छन्, जसले हिजो जनयुद्धमा माओवादीको साथ दिए, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा साथ दिए र अहिले यो ठाउँमा ल्याइपुर्‍याएका छन् । त्यो वर्गलाई लक्षित गरी माओवादीले रणनीति बनाउनुपर्छ ।
माओवादीले लक्षित गरेका वर्गले पाउने सुविधा नै पार्टीका लागि विकास हो । विकासको प्रतिफल सामन्त, नोकरसाही, जमिनदारले पाउने र आधारभूत वर्ग वञ्चित हुने स्थिति पार्टीको मूल नीति होइन । तर, यो समुदायप्रति माओवादीको ध्यान गएको देखिँदैन । देशको पूर्वाधार विकासमा पार्टीले ध्यान दिएको हो तर पार्टीलाई आज जुन हैसियतमा ल्याउन भूमिका खेलेका समुदाय छन्, त्यसको विकासमा ध्यान गएन । यसैकारण माओवादीमा संकट आएको छ र स्थानीय निकायको हालसम्म सम्पन्न निर्वाचनमा भएको पराजयको कारण पनि यही हो । माओवादीले आफ्ना वर्गलाई संरक्षण गर्न नसक्दा एमाले, कांग्रेसले उनीहरूलाई खरिद गरेका छन् । आधारभूत स्तरका वर्गलाई संरक्षण गर्ने र तिनको पक्षमा माओवादी उभिन सकेको भए अन्य पार्टीसँग बिक्री हुने थिएनन् । किनभने, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई तिनै वर्गले भोट दिएका हुन् । तर, माओवादीको विचार र नीतिमा आएको स्खलनका कारण आधारभूत वर्गको विश्वास धरमराएको छ । यी सबै कुराको सचिवायल बैठकले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।
टुटफुट र विभाजनका बाबजुद पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको परिणामलाई बाहिरबाट हेर्दा नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर, आन्तरिक बैठकले टुटफुट र विभाजन किन भयो भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ । विभाजनको शृंखला त पार्टीको आन्तरिक कारण र अवसरवादीको भड्काउले नै भएको हो । यसमा मुख्य दोषी को थियो ? किरणजीले नेतृत्व गरेको पैद्य माओवादी र डा. बाबुराम भट्टराईजीको विभाजन फरक–फरक पृष्ठभूमिमा भएका हुन् । बाबुरामजीको विभाजन पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि पार्टीमा आएको सकारात्मक रूपान्तरणका कारण भएको हो । किरणसँगको विभाजन पार्टी कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा भएको हो । तसर्थ यी अलगअलग सन्दर्भमा भएका विभाजनलाई एउटै कोटीमा राखेर हेर्नु हुँदैन । यसको समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले पहल लिन सकियो भने अबको राजनीतिमा ठूलो शक्ति भएर माओवादी उदय हुने सम्भावना छ ।
अहिले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ । एमालेको अहिलेको नेतृत्व परिवर्तनलाई उल्ट्याउन लागिपरेको छ । माओवादीप्रति रहेको भ्रम चिर्न पार्टीले नसक्नु कमजोरी भयो र एमालेले त्यसैको फाइदा उठायो । एमालेसँग सरकारमा सहकार्य गर्दा संघीयता कार्यान्वयन, संविधान संशोधन र मधेसका जनतालाई समेट्ने कुरामा ध्यान नै दिइएन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता मनपरेको छैन भनेकै हो । जसका कारण परिवर्तनका दुई प्रमुख घटक माओवादी र कांग्रेस मिल्नुपरेको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि मूलतः कांग्रेसकै सहकार्यमा भएको हो । तसर्थ माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
पञ्चायतले देशलाई धराशयी बनायो । त्यसपछि आएको बहुदलले पनि देशलाई उकास्न सकेन । यस्तो अवस्थामा जनता निराश भएर बसेका थिए । जनता निराश भएका वेला प्रतिगामीले सत्ता लिन सक्ने अवस्थामा माओवादीले परिवर्तनको पक्षमा नेतृत्व लियो । जनतालाई निराश हुन दिनु हुँदैन भनेर विकल्पको रूपमा माओवादीले अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । त्यसैको परिणाम अहिलेको परिवर्तन हो । यद्यपि अहिलेको निर्वाचनले माओवादीको नतिजा कमजोर हुँदा सच्चिनु आवश्यक रहेको पुष्टि गरेको छ । वास्तवमा जनतालाई बिग्रिएको माओवादी मन नपरेको हो, सिंगो माओवादी पार्टी नै मन नपरेको होइन । किनभने पार्टी मन नपरेको भए, जनयुद्ध मन नपरेको भए पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा धेरै २ सय ३८ सिट ल्याएर जित्ने आधार बन्ने थिएन । यो जनताको समर्थनमा प्राप्त भएको थियो । तर, जनताले गरेका अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन । माओवादीलाई जिताउँदा सरकार पनि टिकेन, संविधान पनि बनेन भनेर जनता निराश थिए । पार्टीभित्र पनि विभाजन भयो र संगठन अस्तव्यस्त बन्नुका साथै अराजकता पनि पैदा भयो ।
पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस, एमालेका मानिसले माओवादीलाई भोट हालेर परिवर्तनको अपेक्षा राखेका थिए । तर, माओवादीले परिवर्तनको आभास दिन नसकेपछि ती आफ्नै पार्टीमा फर्किएका छन् । माओवादीबाट पहिलो संविधानसभामा पाएको मतलाई स्थायी भोटरको रूपमा लिने गम्भीर त्रुटि भयो ।
सरकार गठनमा दबाब
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जुन उत्साहसाथ सरकार सञ्चालन गर्नुभएको थियो, अहिलेको सरकारले त्यस्तो तत्परता कायम राख्न सकेको छैन । सरकारका आफ्ना जेसुकै कारण हुन्, बाहिर जनताले हेर्दा डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको सन्देश गएको छ । अहिले पनि २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । सरकारले दुइटा तहको निर्वाचन र स्थानीय तहको एउटा प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने कार्यभार बोकेको छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मधेसमा अतिवादी प्रवृत्ति देखिन खोजेको छ, त्यसलाई पनि हल गर्नु छ । मधेसवादी दलको चासो के छ भन्ने विषय फरक हो, तर उनीहरूले उठाएका विषयले जनताको मन जितेको छ । त्यसैले एजेन्डा कसले उठाएको छ भन्ने भन्दा पनि कस्ता एजेन्डा उठेका छन् भन्ने विषय हेरेर सम्बोधनको पहल हुनुपर्छ । वास्तवमा मधेसवादी दलको रबैया कसैलाई मन परेको छैन तर उनीहरूले उठाएका विषय जनताको सरोकारसँग जोडिएका छन् । जनताले परिवर्तन खोजेका छन् र सरकारले परिवर्तनको अभास दिलाउनुपर्छ । यी उपलब्धि हासिल गर्न माओवादीले सरकार गठन चाँडो गर्न
दबाब बढाउनुपर्छ ।
(पूर्वमन्त्री गजुरेल माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य हुन्)